Barmaamijka Adeegyada Mawduuca GRM: Keenida Sirdoonka Hawlahaaga Ganacsi | Martech Zone
Jimco, Nofeembar 2, 2018 Douglas Karr
Mashruucyada Maareynta Maaraynta Ganacsiga (ECM) ayaa sii wadaya inay horumariyaan waxa ay bixiyaan, ma ahan oo keliya inay noqdaan keyd dukumiinti, laakiin dhab ahaan waxay siiyaan sirdoon howlaha ganacsiga. Nidaamka Adeegyada Mawduuca ee GRM (CSP) ayaa aad uga badan nidaamka maareynta dukumintiyada. Waa xalka meesha dukumiintiyada la wadaagi karo la abuuri karo ka dibna qulqulka shaqada lagu hagaajin karo. GRM's CSP wuxuu oggol yahay a nidaamka maamulka content (CMS) si loo dhexgeliyo gorfaynta xogta, barashada mashiinka, soo qabashada xogta caqliga badan, iyo softiweerka DMS si loo maareeyo dukumiintiyada, nooca raadraaca, astaamaha amniga tikniyoolajiyadda sare, dareenka leh maareynta habka ganacsiga (BPM) iyo Barnaamijka Maareynta Shaqo (WMS)
Taasi waa astaamo badan oo 3-xaraf ah!
Astaamaha Platform Adeegyada Mawduucyada GRM waxaa ka mid ah:
Automate iyo Streamline Geedi socodka - Hawlaha ganacsi ee maalinlaha ah sida amarka iibsiga ama ka baaraandegista sheegashooyinka inta badan waa kuwo gacmeed, waxay u nugul yihiin dib u dhac iyo khaladaad, waxayna had iyo jeer abuuraan dhibaatooyin waaweyn marka laga leexdo. Adeegyada maadooyinka GRM, waxaad si fudud otomaatig ugu noqon kartaa una toosin kartaa howlaha noocan oo kale ah. CSP-keena ayaa raadraaca dhammaan howlaha isticmaaleyaasha iyo dib-u-eegista dukumiintiga maaddaama ay ka wada shaqeeyaan waqtiga-dhabta ah, wuxuuna si firfircoon kor ugu qaadaa horumarka ku aaddan dhammaystirka howlaha muhiimka ah.
Nidaamka Maareynta Mawduuca Ganacsiga - barnaamijkooda adeegyadooda maaddadeed waa nidaam maareynta maareynta waxyaabaha ay ka kooban tahay AI-kexeeyo oo soo saarta isla markaana ka baaraandegta xogta aan habeysnayn, xitaa nidaamyada dhaxalka, iyo hagaajinta geeddi-socodka ganacsiga. Waxaan dhaafnay saxeexyo elektiroonig ah. Waa CSP loogu talagalay in si joogto ah loo hagaajiyo hababka ganacsiga iyo marin u helidda, xitaa aaladaha mobilada.
Diiwaangeli Lifecyle maamulka - GRM waxay soo bandhigeysaa gabi ahaanba qeyb ka mid ah adeegyada maareynta dukumiintiyada kuwaas oo u rari kara una beddeli kara feylasha waraaqaha dukumiintiyada dhijitaalka ah, soo saari kara xogta, kala sooci kara diiwaanada, una diyaarin kara in lala kaashado howlaha ganacsi ee shirkaddaada. Wixii saacado qaadan jiray hadda waxaa lagu dhammeeyaa ilbiriqsiyo. Intaad horeyba u maareynaysay geeddi socodka socodka shaqada, naso inaad hubiso in dhammaan diiwaanadaada si ammaan ah loogu kaydiyay keydkeena dukumiintiyada daruuriga ah ama goobaha dukumiintiyada dukumiintiyada ee ka baxsan, lagana heli karo markasta oo aad u baahato.
GRM's adag, daruur ku saleysan madal adeegyada content (CSP) waa nidaam dhaqaajin iyo heer sare oo la qiyaasi karo ka kooban oo ka kooban qalab iyo kartiyo ka caawiya ganacsiyada inay la wareegaan xogtooda - abaabulka iyo u adeegsiga si hufan oo wax ku ool ah. Ka mid ah awoodahaas waxaa ka mid ah Falanqaynta Waxqabadka, falanqeyn saadaalin ah oo bixisa aragtiyo waqtiga-dhabta ah si isticmaaleyaashu isla markiiba u aqoonsadaan arrimaha iyo fursadaha suurtagalka ah, oo ay ula dhaqmaan si firfircoon.
Ku saabsan GRM
Maareynta Macluumaadka GRM waa hormuud bixiye nidaamyada maaraynta macluumaadka. GRM ee adag, adeegga nuxurka adeegsiga dariiqa ku saleysan wuxuu u adeegaa sidii udub dhexaadka xalalka dhijitaalka ah ee GRM ay u siiso macaamiisheeda. U adeegida xarun kala duwan oo warshado ah sida daryeelka caafimaadka, dowladda, sharciga, maaliyadda iyo ilaha aadanaha, GRM waxay u fidisaa macaamiisheeda adeegyo ay ka mid yihiin dijitaalka dhijitaalka ah, xalalka qabashada xogta horumarsan, nidaamyada maareynta dukumintiyada, otomaatiga shaqada, keydinta xogta dhaxalka, u hoggaansanaanta iyo maamulka, ganacsiga maaraynta nidaamka iyo awoodaha falanqaynta ee horumarsan, iyo sidoo kale qalab buuxa oo ah dukumiintiyada kaydinta, iskaanka iyo adeegyada maareynta diiwaanada jirka.
Tags: geedi socodka ganacsigakaydinta dukumiintiga daruuriga ahsentimitirQalabka Adeegyada Tusmadacspfalanqaynta xogtasoftware maareynta xogtadmskeydinta dukumintigaecmMaamulka Maaraynta Maaddadagrmqabashada xogta caqliga lehbarashada mashiinkadukumiinti warqad ahraadinta noocahababka socodka shaqada